China Elastic Fastener E2063 Rail Clip ho an'ny mpamokatra sy mpamatsy rafitra fifadian-kanina | Lanling
Elastic Fastener E2063 Rail Clip ho an'ny rafitra fanamafisana ny lalamby
Vidin'ny FOB: USD 1.2 ~ 1.6
Lanja: 0,68 kg / pcs
Fahaizana manome: 200.000 pcs / volana
Rafitra fanamafisana ny Rail Rail
ny clip elastikae-clip efa napetraka any amin'ny firenena 50 mahery acorss fampiharana an-jatony, izay azo ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny karazana faritra lalamby. Nandritra ny am-polony taona maro, ity teknolojia ity dia nitondra soa aman-tsara ny passegngers manerantany sy ny entam-barotra izay mahatonga ireo fatotra ireo dia mbola be mpampiasa eran'izao tontolo izao.
1. Rafitra azo antoka sy azo antoka avy amin'ny mpamorona e-clip voalohany
2. Ny famolavolana Threadless & self-tensioning dia mahatonga ny rafitra tsy mila manamarina ny tselatra
3. Drafitra maro isan-karazany ho an'ny fampiharana sy tontolo iainana rehetra.
mihoatra ny 2750 bls (Deflection 11.1mm)
Kitapo 5 tapitrisa tsy misy triatra
Ny clip elastika elastika dia mampiasa ny fahombiazan'ny deformation miondrika amin'ny fitaovana sy ny fahombiazan'ny deformation torsional an'ny fitaovana (indrindra ny fizarana elastika elastika boribory), noho izany ny elastika dia tsara amin'ny ankapobeny, ary amin'ny ankapobeny tsy misy faritra mihaosa. Noho izany, avo ny tahan'ny fampiasana fitaovana. Amin'ny boriborintany mahazatra, antenaina amin'ny ankapobeny fa ny fiaran-dalamby dia manana tsindry ambony sy elastika tsara. Amin'io lafiny io, ny clip elastika dia manana tombony mazava.
Teo aloha: Elastic Fastener E2039 Rail Clip ho an'ny rafitra fanamafisana ny lalamby
Manaraka: Elastic Fastener E2031 Rail Clip ho an'ny rafitra fanamafisana ny lalamby
Elastic Fastener E2055 Rail Clip ho an'ny lalamby Fa ...
Elastic Fastener E2039 Rail Clip ho an'ny lalamby Fa ...
e2055, clip amin'ny lalamby, mpamatsy lalamby, clip elastika, rafitra fifamatorana lalamby, Gauge Lock Clip,